Soo Celinta Badbaadinta 2GB Faylka PST.
Bogga ugu weyn Products DataNumen Outlook Repair Soo Celinta Badbaadinta 2GB Faylka PST
DataNumen Outlook Repair - Dib u soo kabashada Feejignaanta 2GB PST
4.90 / 5 (laga bilaabo 1,592 cod)
Isticmaalka DataNumen Outlook Repair si aad uga soo ceshato faylkaaga weyn ee 2GB PST, adigoo:
U beddelo qaabka cusub ee Muuqaalka 2003.
U kala qaad dhowr faylal yaryar
Microsoft Outlook 2002 iyo noocyada hoose waxay ku xaddidayaan cabirka faylka PST 2GB. Mar kasta oo cabirka faylka PST uu gaaro ama ka bato xadkaas, ma awoodi doontid inaad marin u hesho, ama kuma dari kartid wax xog cusub ah. Tan ayaa la dhahaa Dhibaatada faylka ee PST.
Microsoft ma haysato waddo lagu qanco oo lagu xalliyo dhibaatada. Xalka ugu fiican waa sheygayaga DataNumen Outlook Repair, kaas oo ka soo kaban kara faylka weyn ee PST si fudud oo waxtar leh. Si tan loo sameeyo, waxaa jira laba habab oo kale:
Haddii aad haysatid Muuqaalka 2003 ama noocyo ka sareeya, waad awoodi kartaa u beddel faylka weyn ee PST qaabka cusub ee Muuqaalka 2003, oo aan lahayn xaddiga cabbirka 2GB. Tani waa habka la doorbido.
Haddii aadan haysan Muuqaalka 2003 ama noocyo ka sareeya, waad awoodi kartaa u kala qaad faylka weyn ee PST dhowr faylal yaryar. Fayl kasta wuxuu ka kooban yahay qayb ka mid ah xogta faylka asalka ah ee PST, laakiin wuu ka yar yahay 2GB sidaa darteed waxaad ku heli kartaa Muuqaalka 2002 ama noocyada hoose dhib la'aan. Habkani waa wax yar oo aan habooneyn maadaama aad u baahan tahay inaad maamusho faylal badan oo PST ah ka dib habka kala-baxa.
Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan dhibaatada faylka PST ee weyn.
Soo Celinta Badbaadinta 2GB Faylka PST